FEPETRA COVID19 – FANABEAZANA : Mianatra avokoa ny mpianatra ny alatsinainy izao, hajaina ireo fenitra ara-pahasalamana – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:36
Tsy maintsy hajaina ireo fepetra ara-pahasalamana.
Accueil/Songadim-baovao/FEPETRA COVID19 – FANABEAZANA : Mianatra avokoa ny mpianatra ny alatsinainy izao, hajaina ireo fenitra ara-pahasalamana
FEPETRA COVID19 – FANABEAZANA : Mianatra avokoa ny mpianatra ny alatsinainy izao, hajaina ireo fenitra ara-pahasalamana
Nanao fanambarana omaly ny teo anivon’ny Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, nanamafy ny fiverenan’ny mpianatra an-dakilasy amin’ny alatsinainy 17 Janoary 2022 ho avy izao. Noraisina ny fepetra, araka ny fanazavana, noho ny maha zava-dehibe ny tsy maintsy hanohizana ny fampianarana. Misy kosa anefa ireo toromarika maromaro tsy maintsy harahina, mifanaraka amin’izao fiverenan’ny fampianarana izao.
Mametraka ireo paikady rehetra ny Minisiteran’ny Fanabeazam-Pirenena amin’ny fanohizana ny fampianarana eo anatrehan’ny valanaretina Covid-19, araka ny fanambarana omaly. Voatazona, noho izany, datin’ny 17 Janoary 2022, hiverenan’ny fampianarana manerana ny Nosy. Toromarika maromaro anefa no navoakan’ny teo anivon’ny Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena foibe, mifanaraka amin’io fepetra fiverenana an-dakilasy io. Voalohany indrindra amin’izany ny tsy maintsy hanajana fatratra ireo fenitra ara-pahasalamana tsy hiparitahan’ny valanaretina Covid-19, dia ny fanasan-tanana, fanajana ny elanelana iray metatra, fanaovana arovava orona, famendrahana efitrano fianarana sy birao ary ny fanangànana komity mpanara-maso. Mety hisy rindran-damina tsy maintsy hapetraka eo amin’ny fandaharam-potoana hianaran’ny ankizy, noho ny fanajàna ny elanelana ao an-dakilasy, ka anjaran’ny lehiben’ny sekoly no mandamina izany, araka ny fanambarana.
Raha sanatria misy soritra mampiahiahy eo amin’ny fahasalaman’ny mpianatra iray, dia manatona tobi-pahasalamana avy hatrany ary tsy tokony ho any an-tsekoly aloha raha tsy mahazo alalana avy amin’ny mpitsabo. Raha voamarina fa mararin’ny Covid-19 ny mpianatra na mpiasa iray ao an-tsekoly, dia tsy maintsy manaraka ny fe-potoana fihibohana sy fitsaboana, ka mahazo taratasy fanamarihana avy amin’ny mpitsabo vao miverina mianatra na miasa any an-tsekoly indray, raha ny fanazavana. Raha misy maromaro kosa ireo mpianatra no mararin’ny covid-19, dia tokony hikatona ilay kilasy, ary raha sanatria maro loatra ireo kilasy misy marary, dia mikatona ilay sekoly rehefa avy mifandinika amin’ireo tomponandraikitra isan’ambaratongany.
“Tokony hitovy foana ny taha-pahalalana azon’ny ankizy na ho an’ireo manatrika fampianarana any an-tsekoly na ho an’ireo voatery mijanona any an-trano”, hoy ny Minisitera foibe. Efa vonona eny anivon’ny Cisco sy Dren rahateo, ireo kahie fampianaran-tena natokana ho an’ny kilasy T1, T4, T6, ary T8, ho an’ny taranja Malagasy sy Frantsay ary Matematika. Efa misy ny taranja rehetra kosa izany ho an’ny kilasy T5 sy T9. Efa vonona sy azo alaina ao amin’ny tranonkala sy tahala fesibokin’ny MEN ireo raki-pahalalàna ho an’ny taranja rehetra amin’ny fampianarana ampitain-davitra. Ankoatr’ireo dia efa misy ihany koa ny fandaharana manokana ho an’ny fampianarana eny anivon’ny onjampeo sy fahitalavitra ho fanamafisana sy fanohizana ny fampianarana manoloana ny valanaretina.
“Samy fahavalo na ny aretina na ny habadoana, ka aoka isika samy ho hentitra amin’ny fanarahana ireo toromarika rehetra ireo mba hitohizan’ny fampianarana ao anaty fitandremana feno”, hoy hatrany ny fanambarana.
« LES AMIS DE MENABE » : Mpianatra miisa 154 nomena fanampiana
𝐅𝐀𝐍𝐀𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄𝐑𝐀𝐇𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐕𝐄𝐋𝐈𝐑𝐀𝐍𝐎 : Tafapetraka ny vato fototry CSB II ao Ambatolampy
HETSIKY NY MPANOHITRA TETSY TANJOMBATO : Nohajain’ny Fanjakana tanteraka ny fahafaha-maneho hevitra
VONDRON’NY MPIANGALY TANTARA : Notolorana mari-boninahi-pirenena momba ny kanto sy ny soratra ireo nahavita be
VELIRANON’NY FILOHA : Natomboka ny fanatanterahana ny tetikasa « Miami »